KMD ရဲ့ HTC က official show room ဖွင့်တာ တစ်လတောင်မပြည့်သေးဘူး ဇာတ်လမ်းစလာပြီ | Yangon Express
»နည်းပညာ»KMD ရဲ့ HTC က official show room ဖွင့်တာ တစ်လတောင်မပြည့်သေးဘူး ဇာတ်လမ်းစလာပြီ
KMD ရဲ့ HTC က official show room ဖွင့်တာ တစ်လတောင်မပြည့်သေးဘူး ဇာတ်လမ်းစလာပြီ
Posted by yangonexpress on January 21, 2013 in နည်းပညာ
ံဒါလား လိုင်စင်ရ HTC Services .. မလုပ်တတ်ရင်မလုပ်တတ်ဘူးပေါ့ လေကြီးမိုးကြီးနဲ့ ..သူဟာ သူကောင်းနေတဲ့ HTC ရေ KMD လုပ်မှ နာမည်ပျက်နေမယ် .. တရက်ထဲ အလုံး ၄၀၀ ကျော်ရောင်း ရတယ်ဆိုပဲ ..
ဒီနေ့ HTC XL လေး Root ဖောက်တာအဆင်မပြေလို့ကြာနေတာနဲ့ လုပ်ကြည့်တာလည်းအဆင်မပြေဘူး ဒါနဲ့ HTC လိုင်စင်ရ KMD ကိုပြေးပါတယ်
အဲဒီမှာပြသနာစတာပဲ ..KMD HTC Services တဲ့ဗျာ ..ဒီ XL အလုံးလေး ကို Original Rom လေးပြန်တင်ပေးပါလို့ ပြောတော့ ..KMD HTC Services ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Root ထားတော့ wentry ပျက်ပြီတဲ့ Code တွေက သေသွားလို့ မရဘူးတဲ့. ကိုယ်ကလဲ အားကိုးတကြီးဆိုတော့ အကိုရယ်အဆင်ပြေအောင်တော့လုပ်ပေးပါ ..မရဘူးတဲ့ ပြင်ဆိုလဲ ပြင်ပေးမယ် $ 30 ပေး ရမယ် ..ရမှာမဟုတ်ဘူး ၃၀ ပဲ ကုန်သွားမှာတဲ့ .
တော်တော်လေးလေသွားတယ် ဒါနဲ့ ပြောလိုက်တယ် .အကိုတို့ဆားဗစ်က ဘာဆားဗစ်လဲဆိုတော့ ..ပြင်တာတဲ့ ..ဒါဆို ဒါလဲ ပျက်နေပြီး ပြင်ပေးလေဆိုတော့ Company rule ပါတဲ့ မရဘူး ပျင်ရင် ဆားကစ်ဘုတ်တခုလုံးလဲ ရမယ်တဲ့ Rom လေးမှားတင်တာကိုနော် ပြောလိုက်တာ ကိုယ်က Android ကြောင်းမသိ ရင်တော့ ယုံရမှာပဲ ..တော်တော်လေး ရီချင်သွားတယ် မေးလိုက်ပါသေးတယ် ကျွန်တော့်မှာ VC တလုံးရှိတယ် အခုရောင်းနေတဲ့ VC တွေလို မြန်မာစာပြန်တင်ပေးလို့ရမလား Root လဲမလုပ်ထားဘူး Original ပဲရမလားဆိုတော့ မရဘူးတဲ့ ……… ဒါလား လိုင်စင်ရ HTC Services .. မလုပ်တတ်ရင် မလုပ်တတ်ဘူးပေါ့ လေကြီးမိုးကြီးနဲ့ ..
အဲတာနဲ့ ရတယ် မလုပ်နိုင်ရင်နေတော့ဆိုပီးပေါက်ပေါက် နဲ့ပြန်လာလိုက်တယ် ..မပြန်ခင် ပြထားတဲ့ VC တို့ one X တို့ Better fly တို့ တွေ့ခဲ့ပါတယ် ..မြန်မာစာ ပါပါတယ် ..မြန်မာစာဆိုတာက ဖုန်း တခုလုံးကို မြန်မာဘာသာပြောင်းထားတာ ..websit ကစာတော့ဖတ်မရဘူး ဖောင့်ကလဲ ဇော်၈ျီလဲမဟုတ် ဘာဖောင့်မှန်းမသိဘူး ..မြန်မာစာပါတာပဲ ရှိတယ် ဘာမှမထူးဘူး ဈေးကလဲ သူများထက် ၂၀၀၀၀ – ၃၀၀၀၀ များသေးတယ်
ဒီလိုနဲ့ ၃ လမ်းကျော်က ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းက Xcode ကို သွားလိုက်တယ်
ရလားဆိုတော့ ရတယ် တဲ့ ၁ နာရီကြာရင် ပြန်လာတဲ့ ..ကဲမရဘူးဆို ..htc sevices ..နောက်ဆုံးထွက် တဲ့ ORIGINAL ROM ပါ တင်ပေးလိုက်မယ်တဲ့ Root လဲရမယ်တဲ့ ..အကိုရေအခုရောင်းနေတဲ့ HTC တွေမှာပါတဲ့ မြန်မာစာ rom ကောရမလားဆိုတော့ ရတယ်တဲ့ဗျာ ..
ဘာလို့ဒီပို့စ်တင်ရလဲဆိုတော့ ..ကျွန်တော်က HTC Crazy တယောက်ပါ .. Samaung , Iphone တို့နဲ့ဘယ်သူသာတယ်ပြောရင်တောင် HTC ကိုပဲပြောခဲ့တာ ရန်ဖြစ်ရတဲံ့အထိ အရမ်းကြိုက်ပါတယ် ..ဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးထင်တာပဲ ..KMD ကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပါ .
HTC အကြောင်းဝမ်းသာအားရရေးခဲ့တဲ့ပို့စ်လေး ၁ပတ်တောင်မခံဘူး
← အကြမ်းဖက်သမားအများစုဟာ အစ္စလာမ္မစ်တွေဆိုတာ မဟုတ်မှန် 99.6 % အကြမ်းဖက်သမားဟာ အစ္စလာမ္မစ် မဟုတ်ကြောင်း ဥရောပရဲတပ်ဖွဲ့ (Europol) ထောက်ပြ
KMD ရဲ့ HTC က official show room ဖွင့်တာ တစ်လတောင်မပြည့်သေးဘူး ဇာတ်လမ်းစလာပြီ →